Oromo Views & Headline News: Labsa GABUO Damee Toronto
Onkololeessa 19, 2009
Dhimmi labsa kanaa waayee namni Ibsaa Nagawo jedhamu gaaffi fi deebii (interview) Radiyoo Sagalee Adda Bilisummaa Oromootiin (SABO) kurfaawee guyyaa gaafa Onkololeessa 18, 2009 dhihaate irratti haala itti if dhiheesse kan ilaalu.
Obboo Ibsaa Nagawo yeroo tokkotti miseensa Gumii Adda Bilisummaa Ummata Oromiyaa (GABUO) Damee Toroonto ta’uun isaa waan haalamuu mitti. Haa ta’u malee, heera fi seera GABUOtiin alatti haala naamusa dhabaafi sirna dhablummaan guutameen damee Toroonto, darbees guutuu dhaaba keessatti jeeqama uumuf waan tattaafii godheef, GABUOn tarkaanfii miseensummaa isaa rarraasu fudhatee jaramayaa keessaa erga qophame ture jira.
Haala kanaan GABUO irraa rarraafamee osoo jiruu, raadiyoo SABO irratti gadi bahee akka waan GABUO keessatti itti gaafatamummaa qabuutti if dhiheesee jira. ”Bakka bu’aa murna GABUO koree biyyaa keessa fi Damee Toroonto” jedhee if moggaasudhaan dhihaate jira.
Nuti miseensoonni GABUO-Damee Toroonto kan sirnaan GABUO waliin hidhannoo qabaachudhaan hojjachaa jirru yeroo ammaatti Obboo Ibsaan miseensa keenya akka hintaane akka hubatamu; darbees itti gaafatama inni baanu kana irraa waan beeknu akka hinjjirre namootni oddeefanoo radiyoo Sagalee Adda Bilisummaa Oromoo kana hordofaa turtan martinuu akka nuuf hubattan jenna.
Miseensota GABUO Damee Toroonto
Posted by Oromia at 8:55 PM